Ampiharo ny lokanga - Ahoana ny fomba hanaovana azy mifanaraka amin'ny tarehinao | Bezzia
Hainao ve ny manisy «blush»? Tena toa zavatra tsotra be izany ary tsy hoe mila manasarotra be ny tenantsika isika, fa indraindray raha tsy manaraka ny dingana mety dia mety tsy ho izany koa ny vokany. Ka tonga ny fotoana hahafantarana ny fomba tokony hataontsika arakaraka ny karazana tarehy ananantsika.
Satria izay tadiavintsika dia foana asongadino ireo teboka sy faritra tsara indrindra aminay, noho izany dia mila torohevitra tsara indrindra isika. Angamba nieritreritra ianao fa tsy nanana siansa firy ilay blush rehefa ampiharina, fa araka ny ho hitanao dia manana ny fika kely ihany koa izy. Noho izany, avelao ny tenanao hoentin'ny rehetra ary ho hitanao ireo valiny lehibe antenainao.
1 Fomba fanosorana menamenatra amin'ny tarehy efajoro
2 Fomba fanosorana menamenatra amin'ny tarehy lavalava
3 Asio tarehy malemilemy amin'ny tarehy boribory
4 Ho an'ny tarehy lava be
5 Tava telozoro
Fomba fanosorana menamenatra amin'ny tarehy efajoro
Manomboka amin'ny tarehy toradroa isika, izay misy valanoranomaso somary voamarika sy zoro. Toy izany koa, ny takolakao dia ho avo lenta ary midika izany fa tsy maintsy manaraka andian-dingana maromaro isika hahafahana mampihatra ilay loko mena. Koa satria tadiavintsika izany, dia ny hanomezana famaranana mamy kokoa amin'ny tarehy izay antsoina hoe manamafy. Ka, hitady ny takolaka isika ary hanasongadinana ny tapany amboniny. Ho any no ametrahantsika ny loko mena fa mankany amin'ny faritra ivelany indrindra. Manaova hetsika boribory vitsivitsy ao amin'ilay faritra mba hifangaro tsara ary ho hitanao ny fomba anehoana ny fikasihan'ny tanora kokoa ao anatin'ny segondra vitsy.
Fomba fanosorana menamenatra amin'ny tarehy lavalava
Izy io koa dia iray amin'ireo endrika somary fahita ary amin'ity tranga ity, dia tsy maintsy lazaina fa manana ny ampahany amin'ny takolany izy ireo noho ny faritry ny saokany ary na dia ny handrina aza. Ka noho izany, dia mazava fa efa hanatsara ny takolaka, ka ity mampiavaka antsika ity dia mampanontany tena antsika ny fomba fametrahana ilay blush. Ny marina dia dingana tsotra ihany koa izany ary, hanitatra ny faritra izahay ary hametraka azy manerana ny takolaka fa tsy ny tapany amin'ny takolaka ihany. Fa eny, manjavozavo ary miaraka amin'ny loko maivana toy ny paiso izay iray amin'ireo toerana tena tianao indrindra. Miezaha manao ilay loko avy eo afovoany mankany amin'ireo faritra akaiky.
Asio tarehy malemilemy amin'ny tarehy boribory
Rehefa miresaka tarehy boribory isika dia miresaka ireo izay manana halavirana mitovy be amin'ny halavany sy ny sakany, noho izany dia nariana ireo faritra zoro fa eny, mazàna dia somary malalaka ny cheekbones. Ka ny fomba fampiharana ny mena dia manampy antsika hanasongadina ny hatsaranay, tena mora. Amin'ity tranga ity dia tsara indrindra apetaho eo ambanin'ny taolana amin'ny takolakao ihany izy io ary ialao ny ampahany amin'ny takolakao. Tsara kokoa raha ataonao amin'ny fomba miakatra toy ny hoe hahatratra ny tempoly ny lokony. Satria fomba iray hanitarana an'io faritra io.
Ho an'ny tarehy lava be
Ity karazana tarehy ity dia mahatonga ny saokany hanana endrika lava sy tery kokoa, izay nanjary nalaza kokoa. Fa marina fa amin'ny tery ny takolaka dia miavaka koa. Satria, Mety ny manao karazana tsipika marindrano izay miainga avy eo amin'ny faritry ny orona ka hatrany amin'ny sofina. Satria fomba iray hialana amin'ilay sarin'ny halavany ananan'ity tarehy ity sy hanafohezana azy, na dia eo amin'ny haavon'ny effets optika aza izany.
Matetika dia tarehy mahia izay tery ny handrina fa malalaka ny valanoranony. Ka, mba mandanjalanja kely ireo faritra rehetra ireo hampiharintsika amin'ny fomba tsara ilay blush. Amin'ity tranga ity dia hanao karazana tsipika eo amin'ny tapany ambony amin'ny takolaka isika. Zavatra iray izay niseho koa tamin'ny endrika karazana toradroa. Tsy maintsy manaraka hatrany ny tsipika voajanahary amin'ny takolaka voalaza ianao. Tsy manana fialantsiny intsony ianao izao hanasongadinana ny tavanao!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Fomba fanosorana ny mena raha ny tarehinao